Soo dejisan eViacam 2.1 – Vessoft
Bogga rasmiga ah: eViacam
eViacam – software kaas oo ka caawiya dadka naafada ah si ay u maareeyaan cursada muraayadda iyada oo loo marayo webcam. Barnaamijku wuxuu u aqoonsanayaa madaxa isticmaalaha iyada oo loo marayo webcam ku xiran iyo raadadka dhaqdhaqaaqa madaxa kaas oo u dhaqma sida kabaal si uu u dhaqaajiyo tilmaamaha mouse. eViacam wuxuu kuu ogolaanayaa inaad sameysid aaladaha raadinta socodka ama awood u yeelashada muuqaalka tooska ah ee wejiga. Nidaamka habka software-ka ah, barnaamijku wuxuu bixiyaa inuu sameeyo dhaqdhaqaaqa gaaban oo saxan oo ah jihooyin kala duwan, oo keydso natiijooyinka haddii calaamadda cayayaanka uu dhaqaaqo iyadoo loo eegayo baahida qofka isticmaala. eViacam ayaa sidoo kale soo jiidi kara jadwalka moodada oo la xakumi karo adigoo haysta cursorka astaanta software ama faylka waqti go’an.
Maareynta cursada caarada adigoo isticmaalaya dhaqdhaqaaqa madaxa
Hagaajinta dardargelinta, isku dheelitirnaanta iyo ujeedka socodka
Dejinta aagga lagu ogaanayo dhaqdhaqaaqa
Kaliya ama laba-click click badhanka
Xilliyada lagama maarmaanka u ah guji
Soo dejisan eViacam
Faallo ku saabsan eViacam
eViacam Xirfadaha la xiriira